ဘုံစနစ် နှင့် နည်းပညာ ( Opensource ) | Digital Tea House
ဘုံစနစ် နှင့် နည်းပညာ ( Opensource )
Open Source ဆိုတာဘာလဲ?
Open Source ဆိုတာကတော့ မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်သော၊မျှဝေနိုင်သော၊ပြုပြင်နိုင်သော ကိုဆိုလိုပါသည်။ Open Source ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကတော့ software ဖန်တီးသူတွေ၊ ကွန်ပျူတာ Program ရေးသားခြင်း တို့ကနေဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။Program သို့မဟုတ် Softwareရေးသားရာတွင် မည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်သော ပြုပြင်နိုင်သော မျှဝေနိုင်သော Code များကို Open Source Codes လို့ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။
Source code ဆိုတာကတော့ ရိုးရိုးအသုံးပြုသူတွေ မတွေ့နိုင်သော Software ဖန်တီးရာတွင်အသုံးပြုသော code များဆိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ Open source software ဆိုသည်မှာ မည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်သော Code များဖြင့်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော software ကိုဆိုလိုပါသည်။ Software ထဲတွင်ရေးသားထားသည့် Code များကို မည်သူမဆို ၀င်ရောက်ကြည့် ရှုပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့် တံခါးပေါက်ဖွင့်ထားသော အဆောက်အအုံတစ်ခု လိုမျိုး မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သော အရာဖြစ်ပါသည်။ မျှဝေရာတွင်လည်း မည့်သည့်ကန့်သတ်ချက် မျှမရှိပဲ မျှဝေနိုင်ပါသည်။ Open Source software များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မိမိ အသုံးပြုနေသော software များ လုံခြုံမှု ရှိမရှိ မိမိ ကိုယ်တိုင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်ပြန်ပြင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် စာနာမှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာနာစိတ် (Digital Empathy)
စကားဝှက် (​Password ) များအား လုံခြုံစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း Keepass XC
Cambridge Analytica အကြောင်းတစေ့တစောင်း
Digital Tea House isacampaign launched by MIDO to promote digital safety awareness in Myanmar.
ကျွန်ုပ်တို့ ဒီဂျစ်တယ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင် website တွင်ထားရှိသော အကြောင်းအရာများ၊ စာစုများ၊ လမ်းညွှန်များ နှင့် နည်းပညာများ သည် Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License အောက်တွင် ရေးသားဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤ website တွင်မည်သည့်ပုံစံနှင့်ဖြစ်စေ ဖော်ပြထားသော နည်းပညာ နှင့် tools apps နှင့် အခြား မည်သည့်ဖော်ပြချက်ကိုမဆို (as-is) သည်အတိုင်း (သို့) သည်မျှသာဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့်အာမခံချက် မှမပါဝင်ကြောင်း နှင့် တစ်စုံတစ်ရာ ပျက်စီးခြင်း၊ ပျက်သုဉ်း ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့ ဒီဂျစ်တယ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှတာဝန်ယူမည် မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။